Global Voices teny Malagasy » Fifidianana indiana tamin’ny 2009: Jiolahy sy vatom-pifidianana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Aogositra 2018 19:02 GMT 1	 · Mpanoratra Bhumika Ghimire Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, imanoela fifaliana
Sokajy: India, Fifidianana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika
Raha toa ka midika ho dingana izay ahafahan'ny mpifidy misafidy ireo mpitondra tsara indrindra ho an'ny fireneny ny fifidianana, zavatra hafa mihitsy no ireo miseho ao India amin'izao fotoana izao.
Samy mangataka ny vahoaka mba hifidy ho azy ireo ireo andiana jiolahy misimisy ihany, mpikambana amin'ny andian-jiolahy mpanao heloka bevava taloha sy mpitarika voapanga ho nanao heloka bevava tamnà fandatsahan-drà (famonoana, andrana famonoana, fandrobana mitam-piadiana)- jiolahy amin'ny lafiny rehetra.
Manoratra i Abdullah Khan  [amin'ny teny anglisy, toy ireo blaogy rehetra voatanisa] fa ”loza ho an'ny demokrasia indiana ireo tsikombakomba eo amin'ny mpanao politika sy jiolahy ireo”. Mamoaka lisitran-jiolahy nivadika ho mpanao politika izy ; ny ankamaroany avy amin'ny fanjakana be korontana ao Uttar Pradesh sy Bihar.
Ao Utar Pradesh fotsiny, ry Dhananjay Singh (Jaunpur), Aruna Kumar Shukla ‘Anna’ (Unnao), D P Yadav (Badaun), Kadir Rana (Muzaffarnagar) Rakesh Pandey (Ambedkar Nagar), Rizwan Zahir (Shravasti,) sns no kandidà avy amin'ny Samaj Party (Antokon'ny fiarahamonina maro an'isa) izay voampanga ho nanao heloka bevava fahiny.
Ao anatin'ireo kandidà avy amin'ny antoko Samajwadi, Brij Bhushan Singh de Gonda, Rakesh Sachhan avy ao Fatehpur, O P Gupta from Dhaurhara, Mitra Sen Yadav avy ao Faizabad, i Mukhtar Ansari ilay mpandiso tantara (Varanasi), ETBal Kumar (rahalahin'ilay mpangalatra, i Daduwa) avy ao Mirzapur. Mandray anjara amin'ny fifidianana ao anaty lisitry ny Antoko indiana ho an'ny Rariny an'Atoa. Udit Raj i Seema Parihar de Mirzapur, mpangalatra tany aloha tany.
Ao Maharashtra, kandidà amin'ny fifidianana ho an'ny Lok Sabha (Efitra ambany ao amin'ny Parlemanta ) i Atoa. Arun Gawli, jiolahy lasa mpanao politika ao anatin'ny fari-pifidianana anhy Afovoany Avaratr'i Mumbai. Ao Bengale andrefana, ao anatin'ny hazakazaka ho an'ny Berhampore, ao anaty lisitry ny antokon'ny Kaongresy i ‘bahubali’ Adhir Ranjan Chowdhary. Ao Bihar, nisafidy an'i Vijay Kumar Shukla antsoina koa hoe Munna (jiolahy lasa mpanao politika) ny JD (U) ho toy ny kandidà avy amin'ny Lok Sabha. Nofidian'ny antoko Lok JanShakti i M. Rama Singhun avy ao Ara, izay lazaina ho jiolahy ary efa voampanga ho nanao fandikandalàna maro.
Lava be ny lisitr'ireo jiolahy nivadika ho mpanao politika, ary efa voampanga sahady ho mankahery sy manaiky jiolahy ireo antoko politika. Tohanan'i Avinash Narula  ny hoe tsy zavatra mora ny manala ireo jiolahy mpanao politika noho ny ”fiarahany miasa” amin'ny olona eo amin'ny fitondrana. Ambarany izy fa tsy hahomby ny hetsika fampielezankevitra ”Mitantana an'i India” izay natomboky ny gazety mpiseho isanandro Times of India mba hangatahana ireo olon-tsotra tsy hifidy jiolahy satria :
Tsy ho voampanga noho ny antony maro ny ankamaroan'ireo mpanao politika ireo. Misy tsikombakomba iraisan'ireo samy mpanao politika, ny polisy sy ny jiolahy. Fanampin'izany koa, miandry taona maro ny fitsarana vao milaza ny teny farany ao anatin'ny raharaha iray, izay mamela ireo jiolahy hanohy ny fandraisany anjara amin'ny fifidianana sy handresy amin'ny alalan'ny goondagiri (fanamarihan'ny mpandika : ara-bakiteny, lembalemba avo, mandresy amin'ny hafetsena).
Mihevitra ve izany ianareo fa hisy fiantraikany ny Fampielezankevitra manohitra ny fisiana jiolahy amin'ny politika ? tsy mihevitra aho.
Voalohany, satria tsy ao anatin'ny fandaharanasan'ireo antoko politika fototra, na iray aza, ny fandroahana ireo jiolahy ireo tsy hanao politika. Adinoy izany, adinoy ny fandroahana ireo jiolahy ireo tsy hanao politika, tsy miresaka mikasika ny kolikoly akory aza izy ireo.
Faharoa, mila manova ny lalàna isika, saingy tsy afaka ny hanao izany raha tsy misy ireo mpanao politika.
Fahatelo, mila fitsarana haingana kokoa isika, izay mbola afaka ny ho azontsika ihany koa.”
Ao amin'ny vohitra masina hindoue ao Varanasi, mitovy amin'ny tantara anaty sarimihetsika ilay ady amin'ny fifidianana. Olona iray ampangaina ho namono olona (izay toa kisendrasendra, silamo ) no mifanandrina amina ela nihetezana izay fantatra tsara ao amin'ilay antoko, izy io kosa fantatra ho toy ny hindou mpanao an-tendrony. Hifanandrina amin'Atoa. Mukhtar Ansari, izay ampangaina ho namono olona ary any am-ponja ankehitriny Atoa. Murli Manohar Joshi, mpitarika ny BJP. Kandidà avy amin'ny antoko Bahujan Samaj (BSP) i Ansari.
Misintona lakolosy momba ity tontolo iainana ara-politika maloto ity ireo olontsotra, tsy any amin'ny blaogy irery ihany fa amin'ny endrika lahatsary ihany koa. Ao amin'ny YouTube, angatahan'ireo lahatsary maro ny olontsotra mba tsy hanaiky jiolahy ho toy ny kandidà amin'ny Fifidianana .
Ao anatin'ity lahatsary ity, No criminals , manasa ireo mpiara-belona aminy tsy hifidy ireo jiolahy ireo ny tanora maro sasany. Ahitana andiany amin'ny teny hindi izy ity, izay hangatahan'ireo mpifidy ny antoko politika mba tsy hanolotra jiolahy. Tsaratsara kokoa noho izany : afaka mahita ny lisitry ny fiampangana ireo kandidà sasany ao amin'izay isika.
Mitondra hafatra sahala amin'izany ity lahatsary antsoina hoe No criminals Hindi , ity .
Ampahany amin'ny fandrakofana manokana ny fifidianana indiana amin'ny 2009 nataon'ny Global Voices ity  lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/05/124197/
 No criminals Hindi: https://www.youtube.com/watch?v=BO0cRcBCJjs
 Ampahany amin'ny fandrakofana manokana ny fifidianana indiana amin'ny 2009 nataon'ny Global Voices ity: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/indian-elections-2009/